६५ हजार ‘भूत’लाई पेन्सन ! – Malika News
विभिन्न डरलाग्दा काम गरेको देखिन्छ। तर यथार्थमा चाहिँ भूतले पेन्सन थाप्दोरहेछ भन्ने समाचार सुन्नमा आएको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार झण्डै अढाइ लाख मानिसले फर्जीरुपमा पेन्सन पाइरहेका छन् । ४५ हजार मानिसको ठेगाना गलत छ भने ४२ हजारले युवा अवस्थामै वृद्धावस्थाको पेन्सन थापिरहेका छन् । १० हजारले चाहिँ धनी हुँदाहुँदै पनि गरीबको पेन्सन थापिरहेका छन् । एजेन्सी
नुहाउँदा गरिने पाँच गल्तिहरु यस्ता छन् जानी राख्नुहोस !
हाँसोले थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाई कस्तो व्यक्ति ?
November 11, 2017 malika news
सेक्स् गर्न नसक्दा बुढीले अर्को बुढा खोजी
January 15, 2019 January 15, 2019 malika news